Tababaraha xulka Argentina oo Messi ugu yimid Hoygiisa…(Maxaa laga hadlay?) – Gool FM
Tababaraha xulka Argentina oo Messi ugu yimid Hoygiisa…(Maxaa laga hadlay?)
(Catalonia) 09 Agoosto 2017. Lionel Messi ayaa gurigiisa ku soo dhaweeyay Jorge Sampaoli iyadoo uu macallinka reer Argentina uu u soo jeediyay qorshihiisa ku aadan kulamada soo socda ay isreeb reebka koobka adduunka la kala ciyaari doonaan Uruguay iyo Venezuela.
Argentina ayaa ku jirta kaalinta 5-aad ee kala sarreynta CONMEBOL, waxay 31-da August u safri doonaan Montevideo iyadoo uu booskoodu mugdi ku jiro.
Sidaa darteed Sampaoli ayaa kulamo la qaatay Sergio Romero, Nicolas Otamendi, Ever Banega, iminkana kabtan Messi.
Tababaraha xulka Argentina ayaa saddex saacadood Messi kula qaatay gurigiisa ku yaala Catalonia kaddib markii ay Barcelona ka soo adkaatay kooxda Chapecoense.
Sampaoli iyo caawiyihiisa Sebastian Beccacece ayaa u faaqiday muuqaalo ay sideen waxayna Messi kala showreen xaalada Shaxda xilli ay eeganayaan inay bad baadiyaan booska ay ugu soo baxayaan koobka adduunka.
RASMI: Paolo Dybala oo isku taagey lambarka 10-aad ee Juventus